Barnaamijka ka hortaga qaybta 3 | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Goynta Porn Barnaamijka ka-hortagga 'Reward Foundation' ee saddexda qaybood ka kooban
Barnaamijka ka hortaga saddexda qaybood ee "Foundation" (Reward Foundation)
Ka-hortagga daroogada qaawan ee internetka ayaa muhim u ah sidii dib u soo kabashada.
Qof kastaa wuxuu leeyahay door ka caawinta dadka kale inay iska ilaaliyaan daroogooyinka. Maandooriyeha internetka waa khatar gaar ah waqtigan. Dadka intooda badani xitaa ma aqoonsan karaan in ay noqon karto mid xariif ah.
Ka hortagga waa ka sahlan tahay soo kabashada. Dadka badankoodu waxay joojin karaan dabeecadahooda wax qabadkooda. Hase yeeshee, waxay weli dareensan yihiin in ay yihiin dadka adduunka ku haya inta ka dhiman noloshooda. Tani waa arrin u qalantaa iska ilaalinta.
Barnaamijka ka hortagga
Barnaamijka Ka Hortagga Aasaasiga ah ee Reward wuxuu kugula talinayaa in aan ...
Bar dadka sida nidaamka abaal-marinta u shaqeynaya iyo sababta looga fogaado porno waa fikrad wanaagsan. Eeg qeybahayaga Asaasiga Maskaxda.
Sii taageero maskaxeed markii loo baahdo. Hel caawinaad adigoo isticmaalaya 'qof magaciisu yahay' (Scotland) ama la talin xirfadeed. Fikradda kale waa akhrinta dhibaatooyinka dadka kale ee ku saabsan bogagga bogsashada. Tani waxay ku siin kartaa dhiirigelin si aad wax uga qabato dhibaatooyinka hore ama dareenka xiriirka
Bar xirfadaha nolosha si aad uga caawiso dadka inay helaan nolol farxad leh, oo dhammaystiran. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay xarumo taageeraya muujinta shucuurta iyo horumarka shaqsiyadeed. Tan waxaa ka mid ah galmada caafimaadka leh iyo xiriirka xiriirka ee ku saleysan waxqabadka nidaamka abaalmarinta isku dheelitiran. Tani waxay u baahan tahay ujeedo ah isku dheelitirnaan, tixgelin, ixtiraam, xiriir jacayl.
Maxaan ugu talagalnay?
Ka-hortagga halkii laga bogsan lahaa - waa daawo la'aan oo jaban
Waxay yareyneysaa xayeysiinta guud
Furaha farxada iyo nolosha dheer waa jacayl
Waxbarashada galmada iyo jinsiga wanaagsan
Aragtidayadu waxay u tahay qof walba in uu helo tayo wanaagsan, caddayn ku saleysan, daacadnimo iyo isudiyaarin waxbarasho.
Tani waa mawduuc xasaasi ah sababo kala duwan, laakiin cawaaqib xumada ama barashada jinsiga iyo waxbarashaduba waa halis. Ma iska indho-tireyn karno saameynta uu ku leeyahay porno internetka uu ku leeyahay samaqabka bulshadeena. Waxay si gaar ah muhiim ugu tahay jiilalka soo socda. Waa arin caafimaad oo halis ah.
Hay'adda Reward Foundation waxay diyaar u tahay inay horumariso iskaashi si ay u taageeraan helitaanka alaabta wax lagu baro ee dhammaan dugsiyada iyo meel kasta oo loo baahan yahay.
<< TRF 3-Tallaabada Qaabka Soo-kabashada